Tompondaka erantany i Etiopia amin’ny fambolena hazo, saingy mbola ho ela ny fiantraikany · Global Voices teny Malagasy
Afaka manampy mamaha ny krizin'ny toetrandro ny fambolena hazo an-davitrisany.
Voadika ny 05 Oktobra 2019 16:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, русский, українська, 繁體中文, 日本語, Esperanto , English
Namboly hazo avaokà ny vahoaka ao Katbare, Etiopia, ny 23 Jona 2011. Sary avy amin'ny Trees for the Future ao amin'ny Flickr CC BY 2.0.
Tany amin'ny lohandohan'ny volana Aogositra, nametraka ny tenany ho tompondaka vaovao manerantany i Etiopia tamin'ny fambolena zanakazo 350 tapitrisa tanatin'ny iray andro. Ampahanà pôlitika goavana kokoa momba ny fambolena hazo io hetsika io, izay natomboky ny Praiminisitra Etiopiana Abiy Ahmed, ny fitantanany izay mikendry ny hanohitra ny fandripahana ny ala sy ny fiovan'ny toetrandro amin'ny fambolena hazo miisa 4.7 lavitrisa ny volana Oktobra amin'ity taona ity.
Tamin'ny Jolay, namoaka fandinihana iray ny Crowther Lab ao amin'ny ETH Zurich izay nahita fa ny fambolena hazo an-davitrisa manerana ny tany no fomba mahomby sy takatry ny vola indrindra hanoherana ny fiovan'ny toetrandro.
Tsy vitan'ny hoe manadio ny rivotra iainantsika sy miady amin'ny fiovan'ny toetrandro fotsiny ihany ny hazo — fa mampiroborobo ny fahasamihafan'ny valanjavaboary ihany koa izy ireo. Nisy fandinihana natao tao Costa Rica nahitàna fa ny fambolena hazo iray monja dia mety hampiakatra ny isan'ny karazam-borona miainga manakaiky ny haotra ka hatramin'ny 80.
Ny Send a Cow, fikambanana iray tsy miankina miasa manerana firenena Afrikanina enina, dia mandrisika ireo mpamboly sy mpiompy madinika mba hamboly hazo ahavitàna zavatra maro samihafa izay afaka hanome vokatra mihoatra ny iray. Ohatra, mamboly karazan-kazo izay manome voany hohanina sy hamidy nefa koa manome kitay na mampiditra azota anatin'ny tany. Manome antony bebe kokoa ho an'ireo mpamboly sy mpiompy hamboly sy hikarakara hazo ireo tombontsoa ireo, na dia anaty faritra voafetra aza.
Manala ny gazy karbonika eny amin'ny rivotra ny hazo, mitahiry izany ao anatiny sy anatin'ny tany, ary mamotsotra oksizena eny amin'ny rivotra iainana. Ny “permafrost“, sy ny fompotra ary ny saha maitso midadasika, (izay samy ahitàna azy na any amin'ireo faritra misy tendrombohitra na ireo faritra maina ao Etiopia) koa anefa dia mahavita mihazona io gazy karbonika io ary ilaina harovana sy harenina koa.
Nampitandrina ny amin'ireo loza azo avy amin'ny fambolena karazan-kazo tsy avy ao an-toerana, izay mety hanimba ny zavaboary fa tsy hanatsara azy akory, ireo mpanakiana ilay hetsika “Green Legacy” an'i Etiopia.
Tamin'ity indray mitoraka ity kosa anefa dia namboly masombolinà karazan-kazo kininina zanatany na tsia ary hazo avaokà ireo olompirenena. Nivoatra tao amin'ny firenena niaviany tanatin'ny arivo taona ireo karazana hazo zanatany ireo ary nahazo tanjaka hiadiana amin'ireo aretina misy amin'izao fotoana. Toa mitaratra ny fihemorana amin'ny fambolena hazo kininina bebe kokoa ny fomba fiasan'ny governemanta Etiopiana.
Na izany aza anefa, indraindray dia toa mitombona ihany ny fampiasàna ireo karazan-kazo tsy avy ao an-toerana. Ohatra, misy karazan-kazo botry iray antsoina hoe calliandra, avy any Amerika Afovoany, tena mandaitra amin'ny famokarana vilona feno proteinina fatao sakafom-biby ao Afrika Atsinanana. Hita aminà toerana maro ny masomboly Calliandra ary takatry ny fahefa-mividin'ireo mpamboly sy mpiompy madinika. Toy izany koa, rehefa mila hazo amin'ny fanamboarana sy hatao kitay ny olona, mety tsy ho ireo ao an-toerana no mety kokoa, sy mitombo haingana indrindra. Amin'ireo tranga ireo, tsy maintsy mieritreritra izay hampiasainy ny hazo amboleny sy ny tontolo iainany ao an-toerana ireo mpamboly sy mpiompy, no tsy maintsy miankina amin'ny drafitra ekolojika tsara ihany koa.
Mety hisy fiantraikany be eo amin'izao tontolo izao ny fambolen-kazo: Vao haingana izay no nisy vondrompiarahamonina iray mahatsapa tena ho tomponandraikitra tao Etiopia ka nanolotra ny fotoanany sy nanome vola hamelomana indray ny tany mirefy valo hekitara. Nandany ora maro ireo mpikambana niasa ny tany ary niara-namboly hazo miisa 5.000 sy tapatapakà bozaka miisa 1.200 narahin-dry zareo fikasàna hampiditra hazo fihinam-boa tsy ho ela.